I-Illinois Cannabis Expungement - Ungakhipha kanjani ukukholwa kwe-cannabis
Ukunwetshwa kanye ne-Illinois Cannabis
I-Illinois Cannabis Expungement iyeza kubantu ababoshelwe icala elifanele ukuxoshwa ngaphansi komthetho omusha weCannabis Regulation & Tax Act.
I-Illinois Cannabis Expungement kanye Nokulingana Komphakathi Okuchaziwe
Ukulingana Komphakathi Nokuchithwa Kwensangu
I-Illinois Cannabis Expungement eza ngalabo bantu ababoshelwe, noma abalahlwa yicala, icala elifanele ukuxoshwa ngaphansi komthetho omusha weCannabis Regulation and Tax Act oqala ukusebenza e-Illinois ngoJanuwari 1, 2020. Amacala aphansi e-cannabis aphansi (ukuphatha amagremu angama-500, noma inhloso ukusabalalisa kuze kufike kumagremu angama-30) kuzokhishwa uma insangu isemthethweni e-Illinois. Simboza umthetho kule ndatshana futhi sikunikeza imininingwane.
Kuya ku Abantu abangama-800,000 e-Illinois bazokufanelekela ukuthunyelwa ngamacala abo amancane adlule e-cannabis namanye amacala ambalwa ngaphansi kweSigaba 4 no-5 se-Illinois Cannabis Control Act.
Kuleli khasi, sinikezela ngemininingwane eminingana yokuthi ngabe yiziphi iziphambeko zensangu ezingasetshenziselwa nokuthi singasithinta kanjani isimo sakho njengomfakisicelo wokulingana kwezenhlalo embonini entsha ye-Illinois cannabis.
Ungachaza kanjani izinkolelo ze-cannabis e-Illinois
Thola amarekhodi akho okuboshwa, kwesinye isikhathi abizwa nge- “rap sheet”, ngokuboshelwa insangu noma ukulahlwa yicala futhi uhlole ukuthi kuyafaneleka yini.
Ukuthola kuze kufike kumagremu angama-500, noma inhloso yokusabalalisa kuze kufike kuma-gramu angama-30 kufanelekile ukuxoshwa ngaphansi komthetho omusha we-cannabis wase-Illinois wokuchithwa.
Shayela umtholampilo wangakini osiza ngezomthetho uthole umbono ngerekhodi lakho ukuqala inqubo yokuxoshwa edinga umsebenzi owengeziwe.
"Amacala amancane e-Cannabis" azoxoshwa ngokuzenzekelayo, kodwa lokho kungukutholakala kuphela kwe-cannabis kuze kufike ku-ounce elilodwa (30 gram).
Fakela isicelo sokuxoshwa ehhovisi likamabhalane wesifunda.
Iya enkantolo lapho ngabe kukhona abaphikisana nesicelo sakho sase-Illinois Cannabis expitchment nguMbuso
Cela inkantolo inikeze isicelo sakho sokuqeda ukuboshwa kwakho noma ukuboshwa kwakho.
Amaphoyisa endawo namaphoyisa wombuso kufanele achithe irekhodi lakho, elingathatha cishe izinsuku ezingama-60 emva komyalo.
Nasi isixhumanisi sombiko ovela eColorado okhombisa ukuncipha kokuboshwa nama-DUI ngemuva kokugunyazwa kwe-cannabis.
I-Cannabis Expungement kanye Nokulingana Komphakathi e-Illinois
I-Illinois Cannabis Ukuqothulwa Okuzenzakalelayo Kwecala Elincane LaseCannabis
(G-5) “Icala Elincane Lensangu” kusho ukwephulwa
weSigaba 4 noma 5 soMthetho wokuLawulwa kweCannabis
mayelana nama-gramu angaphezu kuka-30 kunoma iyiphi into
equkethe i-cannabis, uma nje ukwephulwa kungazange
faka phakathi ukuthuthukiswa kwenhlawulo ngaphansi kwesigaba 7 se
ICannabis Control Act futhi ayihlotshaniswa ne
ukuboshwa, ukulahlwa yicala noma enye indlela yokuhlukumeza
ubugebengu njengoba buchaziwe esigatshaneni (c) seSigaba 3 se
Amalungelo Wabahlukumezi Bobugebengu NaboFakazi.
Ukucaciswa kafushane kokuchithwa kweCannabis e-Illinois
Isicelo Sokulingana Komphakathi
I-20% yesikolo sohlelo lwakho lokusebenza
Izinto ezintathu kwabaFakizicelo Zokulingana Komphakathi
Hlala endaweni “Ehlangene Nentuthuko”
Uboshelwe “icala elifanelwe ukwandiswa”
Abasebenzi abayi-10 abagcwele ngokugcwele abangama-51% abavela kunombolo 1 noma 2
Amacala afanele kufanelekile ngenxa yokuchithwa kwemali ngaphansi komthetho weCannabis
Amacala amancane e-cannabis
Hhayi ngaphezu kwama-30 amagremu
Akukho ukuthuthukiswa kwenhlawulo
Ukwephulwa kwesigaba 4 noma 5 soMthetho wokuLawulwa kweCannabis
I-Misdemeanor noma i-Class 4 Felonies
Umthetho Wokulawulwa Kwe-Cannabis - I-Class 4 Felony
Isigaba 4 - Ukuphathwa
Isigatshana C - kufika ku-100 amagremu
Icala elilandelayo - Ikilasi 4 Felony
Isigatshana D - 101 kuya ku-500 amagremu
Icala lokuqala kuphela - Class 4 Felony
Icala elilandelayo - Ikilasi 3 Felony
Isigaba 5 - ukwenziwa nenhloso yokuletha
Isigatshana C - 10 kuya ku-30 ​​amagremu
Isigaba 4 felony
Isigaba somthetho sokuziphatha kwesigaba 135 siyasebenza
Uma unerekhodi lobugebengu, kuzodingeka ukuthi udlale ngaphansi kwemithetho ehlukene ukukhombisa ukuthi uvuselelwe kabusha
Ngakho-ke uma ukufanelekela ukuba ngumfakisicelo wokulingana kwezenhlalo ngoba ukwenzile ngamabomu, mhlawumbe ngeke kusebenze kahle.
Izithombe ezisuka emthethweni wokubuyekezwa kwakho ezintweni ezilinganayo zenhlalo zokuthengiswa kwamacala we-cannabis.
Ukuxoshwa kwababoshiwe "ngamacala amancane ensangu" e-Illinois
Futhi susa iziphambeko noma izigebengu ngaphansi kweSigaba 4 no-5 se-Illinois Cannabis Control Act
Nakhu okunye okuvela emthethweni maqondana namanye amacala e-cannabis afanele ukuxoshwa e-Illinois.
Ukunwetshwa kanye Nokulingana Komphakathi e-Illinoiscript
Sawubona, ngingu Thomas Howard ummeli we-cannabis ungathola ku-cannabis Industry Lawyer.com insiza eku-inthanethi yemibuzo yakho mayelana nokungena nokusebenza kwimboni esemthethweni ye-cannabis. Namuhla, sinesihloko esishisayo ku-cannabis - ukulingana kwezenhlalo. I-Illinois yamukele ngokucacile ukulingana kwezenhlalo emthethweni wayo futhi yakha amacala afanelekele ukuxoshwa afanele abantu njengabafakizicelo bokulingana kwezenhlalo.
Ingxenye yokulingana kwezenhlalakahle yesicelo sakho selayisense le-cannabis yakha amaphesenti angama-20% wesicelo sakho futhi kunezindlela ezi-3 eziyinhloko zokuzithola. 1) bahlala endaweni engathintekile, 2) baboshwe noma balahlwe yicala elifanele ukukhishwa ngaphansi komthetho omusha we-cannabis, noma i-3) basebenze enkampanini ye-cannabis enabasebenzi okungenani abangu-10 besikhathi esigcwele kusuka kunombolo 1 noma 2. amaphuzu okulingana kwezenhlalo, hhayi abafakizicelo - ngoba lapho-ke ubuzodinga iningi lobunikazi nokulawulwa kwamaphoyinti okukodwa nakabili.
Sizogxila njengamanje emacaleni afanele ukuxoshwa. Yiziphi lezo? Umthetho we-Cannabis Regulation and Tax Act ("CRTA") uwadala ngokuchaza igama elisha lobuciko elisemthethweni, "icala elincane le-cannabis," nokuchibiyela isenzo sokulawulwa kwensangu ukuthi kufake kokubili ukuphatha nokuhlosa ukusabalalisa nje iphutha noma isigaba 4 felony.
Yini iphutha elincane le-cannabis? I-CRTA ichaza njengokuphula iSigaba 4 noma 5 seCannabis Control Act esingeqile kuma-gramu angama-30 e-cannabis, inqobo nje uma ingafaki ukuqiniswa kwesijeziso ngaphansi kweSigaba 7 somthetho wokulawulwa kwensangu - ngokuyisisekelo udlame ngaphezu ukushushumbisa noma ukuba nensangu.
Umthetho omusha uvele uwasuse ngokuzenzakalela wonke amacala amancane e-cannabis, angahle adonse inselelo yokuhlukaniswa kwamandla ngoba ngumbusi kuphela onamandla okuxolela abephula umthetho - okungenzeka ukuthi uJB Pritzker angenza njengoba lo nguMthethosivivinywa awusekelayo wawusayina. - Mhlawumbe ukusayina lo mthethosivivinywa kwakuwukuxolelwa kwakhe - ukukhuluma ngokusemthethweni.
Ukudideka kuvela ngamanye amacala achazekayo adinga amaphepha amaningi, kanye nezingqungquthela zokuxoshwa ngo-2020, ukuthola irekhodi lakho. I-CRTA inikeze ukuthi hhayi amacala amancane kuphela e-cannabis angaxoshwa, kodwa futhi nezenzo ezingekho emthethweni kanye nezigameko ze-class 4 ngaphansi kweSigaba 4 no-5 se-Cannabis Control Act.
Isigaba 4 seCannabis Control Act siphathelene nokuphathwa, futhi ungabanjwa uphethe amagremu afinyelela kuma-500 (okuyiphawundi elingaphezudlwana nje kwelilodwa) le-insangu engavunyelwe ukwephula umthetho ngecala elilandelayo. Ungabanjwa ngama-gramu angama-3 kuye kwayi-30 ngesikhathi esilandelayo futhi kube yi-Class 100 felony. Ngakho-ke uma ubanjwa ngephawundi lensangu kanye, ungakuthola ukuxoshwa - kodwa-ke uma lokho kwenzekile…
Mhlawumbe ubuye wakhokhiswa ngaphansi kweSigaba 5 soMthetho Wokulawulwa Kwe-Cannabis ngenhloso yokusabalalisa, ngokuyinhloko ngenhloso yokuthengisa le nsangu. Uma ukhokhiswa ngalokho, inani le-cannabis lingaphansi kakhulu. Ukukhokhiswa ngenhloso yokusabalalisa ngaphezu kuka-10 kodwa ngaphansi kwama-gramu angama-30 e-cannabis kuyisigaba se-4 felony, futhi ngaphansi kwama-gramu ayi-10 kuyiphutha. Ama-gramu angama-30 acishe kube i-ounce, okucishe kube ngaphansi kuka- $ 500 ezikhungweni zakho zasendaweni, kanye nomkhawulo wezimpahla osemthethweni ngaphansi kweCRTA. Mhlawumbe akuyona into engaqondakali ukuthi inani elisemthethweni lokuba nalo lilingana nenani ongaxoshwa ngalo ukuzama ukuletha.
Lezi zichibiyelo ziphakamisa izinto ezi-2 engqondweni yami. Okokuqala, kuzoba nokuboshwa okuningi kwe-cannabis ngokuzayo ngoba izinga lokutholwa elisemthethweni elilodwa lingaqedwa kalula, noma abantu baqale ukukhokha amabhagi abo nge-cannabis bese bebanjwa bekala i-gram bese beyifaka - kodwa lezi Ukwephulwa komthetho okuncane kufanele bonke ukuba baxoshwe, futhi okwesibili, umphumela wokuboshwa okuqhubekayo kuzoba ukuthi igagasi labafakizicelo bokulingana kwezenhlalo lizokhula - ikakhulukazi uma abantu behlela imicimbi yamalungelo e-cannabis emiphakathini eyahlukahlukene eqale ukudlulisa izimiso zokuvimbela amabhizinisi e-cannabis emikhakheni yawo imiphakathi - Akusibo ubungani emndenini ukubopha abantu ngokwenza okuthile okuphephile nokunempilo kunotshwala noma ugwayi - noma ngisho nokudla okusheshayo. Kepha lokhu kuboshwa kuzowa ngokushesha njengoba kwenzeka eColorado ngemuva kokugunyazwa ngokusemthethweni.
Behle kakhulu futhi, ababheki kuphela ukuboshwa kwensangu eColorado, kodwa nokuthi yini okujabulisa ukuboshwa kwe-DUI - nabo bawa ngamadijithi aphindwe kabili. Ngokuningi, ngishiye umbiko osemthethweni ovela eColorado esigabeni sencazelo futhi ngixhumene kuleli khasi lewebhu.
Uma uyisisulu sinye salezi zenzo ezichasekayo futhi ufuna ukungena embonini ye-cannabis - zizwe ukhululekile ukubhekabheka iwebhusayithi yami noma ungishayele ucingo.